Ubuciko nobuchwepheshe bobuxhakaxhaka bunjalo bufike kwezakwala kwezokuxhumana - Bayede News
Ubuciko nobuchwepheshe bobuxhakaxhaka bunjalo bufike kwezakwala kwezokuxhumana
by nguSiyabonga Mtetwa
Isithombe: Foundation Louis Vuitton
Kusukela emandulo ubuciko nobuchwepheshe bulokhu buyingxenye yempilo yethu ekwakheni indlela esixhumana ngayo njengabantu kuyona yona iminxa yempilo ehlanganisa ezemfundo, ezempilo, abamabhizinisi kanjalo nokubuswa kwamazwe imbala.
Lokhu kwenza indlela esibuka ngayo izinto ilokhu iguquguquka ngenxa yokuthuthuka kobuchwepheshe besimanjemanje, esibala kubo nalokhu esikubiza ngobuxhakaxhaka bunjalo (Virtual Reality). Sikubone kakhulu lokhu nyakenye sihlaselwa ukhuvethe olufike nengcindezi eyedlulele emhlabeni wonke. Sikwazile ukuqonda kangcono ukujula neqhaza lobuchwepheshe nobuciko ekubeni isibuko sesikhathi esiphila kuso ngendlela efanayo nalena esisebenzisa ngayo ulimi, imvelo nezehlakalo zasendulo ukuqonda ubunjalo bempilo yangaphambilini. Ingabe lokhu kusho ukuthini emacikweni angalesi sikhathi? Kuyiguqula kanjani indlela esibhala sishicilele ngayo izincwadi, esenza ngayo amaculo namahubo nokuhlanganiswa kwemisindo eyahlukene, esikhangisa ngayo imikhiqizo yezitolo, esithwebula ngayo izithombe, esihlela ngayo imibukiso emikhulu nemincane, esisebenzisa ngayo i-inthanethi nesivikela ngayo imvelo imbala?
Ngokusho kombiko we-IBM’S 2020 Retail Index, ukhuvethe luphoqe nabakhangisi ukuthi basebenzise izindlela zedijithali ukuxhumana nabathengi. Lokhu kuhlanganisa nezitolo zemfashini iLouis Vuitton neGucci eziqalile ukusebenzisa ubuxhakaxhaka bunjalo ukuheha abathengi abasebasha ngokuthi benze izimpahla ezingathekisiwe abangazigqoka kubo ubuxhakaxhaka bunjalo, bathathe nezithombe abangazisabalisa ezinkundleni zokuxhumana. Lokhu kusidwebela isithombe esiphelele ngobunjalo bobuchwepheshe neqhaza lamaciko asebenzisa ikhompuyutha, izibalo, namapixels ekwakheni indlela entsha yokuxhumana.
nguSiyabonga Mtetwa May 21, 2021